अर्नब गोस्वामीलाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइयो | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २०, २०७७ chat_bubble_outline0
रिपब्लिक टिभीका प्रधान सम्पादक अर्नब गोस्वामीलाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ ।
अर्नकबाहेक अन्य दुईलाई सन् २०१८ मा आत्महत्या दुरुत्साहन मामिलामा अबेर राती मुम्बईको एक अदालतले १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाएको हो ।
अर्नब गोस्वामीका वकिल अबाद पोंडाले जमानतको निवेदन दिइएको जसमाथि बिहिबार सुनुवाई हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
डिजाइनर र उनकी आमा सन् २०१८ को मे महिनामा अलीबाग तालकाको कविर गाउँमा आफ्नो फार्महाउसमा मृत भेटिएका थिए ।
सन् २०१९ मा रायगढ पुलिसले यो मामिलाई बन्द गरेको थियो । पछि नाइककी छोरी अदन्याकी ऊजुरीमा महाराष्ट्रका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले पुनः यो घटनाको आदेश दिएका थिए ।
गोस्वामीलाई मुम्बई नजिकैको रायगढ जिल्लाको अलिबाग ल्याइयो र त्यसपछि उनलाई स्थानीय अदालतमा पेश गरियो ।
गोस्वामीले अदालतमा प्रहरीले आफूमाथि कुटपिट गरेको बताए । त्यसपछि गोस्वामीलाई प्रहरी स्टेशन ल्याइयो जहाँ एक सिभिल सर्जनले उनलाई कुटपिटको कुरा प्रमाणित गर्न भने । पछि अदालतले गोस्वामीमाथि कुटपिटको आरोप खारेज गरिदियो ।
#WATCH: Republic TV Editor Arnab Goswami shows injury marks, says, "Policemen surrounded me, held me by the scruff of my neck, pushed me. I'm here without shoes...I've been assaulted." #Maharashtra
बुधबार प्रहरीले ती अधिकारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ जसले आत्महत्या दुरुत्साहनको उक्त घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए ।
समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार ती अधिकारीले पनि अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने छ । अर्नब गोस्वामीसहित उनकी श्रीमती र अन्य दुई विरुद्ध मुम्बई प्रहरीले गिरफ्तारीमा बाधा पुर्याएको भन्दै एफआईआर दर्ता गरेको छ ।
अर्नबको गिरफ्तारीको विषयमा विपक्षले महाराष्ट्र सरकारमाथि हमला गरेका छन् भने इन्टेरियर डिजाइनरको परिवारले गिरफ्तारीको निर्णयको स्वागत गरेका छन् र आफूहले सन् २०१८ लाई कहिले पनि बिर्सन नसक्ने बताएका छन् ।